काठमाडौंमा हर्न बजाए कारबाही - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंमा हर्न बजाए कारबाही
काठमाडौं, चैत २२ । गाडी चलाउँदा तपाइँको हर्न बजाउने बानी छ ?
वा पैदल हिड्दा जथाभावी बाटो काट्नुहुन्छ ?
अबदेखि हर्न बजाउने र जथाभावी बाटो काट्नेलाई कारबाही गरिने भएको छ ।
यस्तो भेटाइए यातायात व्यवस्था विभागले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने तयारी गरेको छ ।
वैशाख १ गतेदेखि आकस्मिक अवस्थाबाहेक अन्य बेला उपत्यकामा हर्न निषेध गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
ट्याग्स: horn, nirwachan, nirwachan aayog